Iibso buugga cuntada ee Thermomix - Thermorecetas
Buugga Cuntada ee Thermomix
Cunnooyinka macmacaanka leh Thermomix
Cunto karis caafimaad leh Thermomix
Ku muuji cuntooyinka Thermomix
Ku muuji cuntada sida 2 leh Thermomix
Cunnooyinka gaarka ah ee leh Thermomix
Buugga wadajirka ah Blogging and Cooking
Bariis iyo Baastada
Cabitaanno iyo casiirro
Saladyada iyo Khudaarta
Cajiin iyo Rooti
Jams iyo keydinta
Maraqa iyo kareemada
Cunto gaar ah
U dulqaadasho la'aanta Laktose
Ukku dulqaad la’aan
Wax ka yar 15 daqiiqo
Wax ka yar 30 daqiiqo
In ka yar 1 saac
In ka yar 1 saac iyo 30 daqiiqo
In ka badan 1 saac iyo 30 daqiiqo
Waa maxay Thermomix?
Iibso Thermomix TM5
TM5, TM31 iyo TM21 u dhigma
Gali o Saxiix oo ku raaxee ThermoRecipes
Buugga cuntada loogu talagalay Thermomix
Bilooyin badan oo shaqo adag ah ka dib, waxaan ugu dambeyntii ku dhawaaqi karnaa xamaasad weyn in buugga Thermorecetas uu hadda iib yahay. Buuggan waxaad ka heli kartaa 100 cuntada lagu kariyo oo lagu diyaariyo Thermomix-kaaga kaas oo aad uga yaabi doontid asxaabtaada iyo qoyskaaga.
100 cunnooyin macaan oo tallaabo-tallaabo ah oo loogu talagalay Thermomix, 60 ka mid ah ayaa ah kuwo gaar ah oo aan weligood lagu daabicin barta
Buugga waxaad ka heli doontaa cunnooyin isugu jira kuwo aasaasi ah iyo kuwo aad u faahfaahsan, suxuun dhaqameed iyo hal-abuur, booqasho ku maraya cunnooyinka qaranka iyo adduunka, adigoon weligaa iloobin dadka xasaasiyadaha qaba iyo dulqaad la'aanta.
Soo iibso buuggeena karinta
Buugga Waxaad si toos ah uga iibsan kartaa Amazon waxayna guriga kuugu imaan doontaa maalmo gudahood.
Dabcan, waxaad sidoo kale ka heli doontaa gudaha dukaanka buugaagta ee Spain sida Fnac, Casa del libro, Corte Inglés ...
BUY BOOK - € 18,95
Sida loo abuuro baloog wax lagu karsado
Kusoo qor Thermorecetas
Bixinta cusub ee Thermorecetas! Ku guulayso buugaagteena iyo €50 Amazon